”1.5 milyan ayaa baahi u dhimanaysa!” – DF Itoobiya oo meel xun ka taabatay Maamulka Tigreega (Cayr laga jartay) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”1.5 milyan ayaa baahi u dhimanaysa!” – DF Itoobiya oo meel xun...
”1.5 milyan ayaa baahi u dhimanaysa!” – DF Itoobiya oo meel xun ka taabatay Maamulka Tigreega (Cayr laga jartay)
(Maqalla) 25 Okt 2020 – Maamul-goboleedka Tigraay ayaa DF Itoobiya ku eedeeyey inay xayirtay kab miisaaniyadeed gaaraysa 285 milyan oo birr oo ay ka heli jireen Bankiga Adduunka, taasoo ka mid ah barnaamij cayr oo kale ah oo la siiyo gobollada dalkaasi hoos taga.
Maamulka ayaa ku dooday in haatan ay baahi halis ugu jiraan 1.5 milyan oo qof oo gobolkaa ku dhaqan kuwaasoo beeraleey u badan kaddib markii ay DF diiddey inay khasnadda Waaxda Beeraha iyo Reer Guuraaga ku shubto lacagtaasi.
Barnaamijkan loo yaqaan Ethiopia’s Safety Net Program ayaa lagu quudiyaa ilaa 9 milyan oo qof oo ku kala dhaqan gobollada Amhara, Oromiya, SNNP, Tigray, Afar, Soomaali, Diri Dhabe, iyo Harar. Waxaana qoysaska daran lagu siiyaa cunto ama raashin.
Dadka ayaa deeto ka qayb qaata howlaha bulshada sida ilaalinta dhulka, degaanka, dhismaha dugsiyada, goobaha caafimaad iyo jidadka.
Michael Abrits oo Gobolka Tigraay u qaabilsan Waaxda Beeraha iyo Reer Guuraaga ayaa sheegay in DF ay lacago badan u xayirtay sababo siyaasadeed, balse aanu jirin sharciyad taa u ogolaanaysa, isagoo ku gooddiyey inay tillaabo qaadi doonaan.
Maamul-goboleedka Tigraay ayaa u muuqda midka laga soo minguuriyey dhaqamo liita oo lagu arkay maamullada Somalia qaarkood, kuwaasoo aanay jirin meel kale oo dunida looga dhaqmo inuu maamul la xafiiltamo dowladdii uu ka tirsanaa balse uuu misna rajeeyo in aan lala xisaabtamin, iyadoo ay Itoobiya haatan dhadhaminayso dawadii qaraarayd ee ay Somalia ku saqraamisay iyadoo adeegsanaysa siyaasiyiin Soomaali ah.
Previous articleKhabiib oo ka hadlay laacib Muslim ah oo uu jeclaa inuu la sheekaysto intii uu noolaa & xiddigo waawayn oo uu hadda la sheekaysto & daawashada ciyaaraha
Next articleFIFA oo qaab dhega hadal ah dhambaal hambalyo ah ugu soo dirtay Wasiirka Isboortiga cusub (Sumad aysan lahayn wasiirradii hore oo uu leeyahay)